#Apps4Africa | GAZETY_ADALADALA
Posted on 16/03/2012 by gazetyavylavitra
Ny Apps4Africa dia fifaninanana mamorona ireny karazana rindrambaiko fametraka amin’ny finday ireny. Natao ho an’ireo firenena aty Afrika izy io, ary tamin’ity taona ity dia tafiditra ao anatin’ny firenena nofidiana hiditra amin’ny andiany faha-7 i Madagasikara. Marième Jamme no nanazava tamin’ireo mpanatrika ny zavatra rehetra andrasana amin’ny mpirotsaka sy ireo mpanatrika tonga maro tao Tsimbazaza CIDST / Malagasy i-Hub. Anisan’ny mpiara-miombona antoka ao anatiny ny TED sy Indigo Trust. Ary raha ny fikarakaràna ny hetsika eto Madagasikara dia isan’ny nanohana tamin’ny fampitaovana ny Ambasady Amerikana.
Raha vao miresaka TED isika dia tsara ny manamarika fa Harinjaka Ratozamanana dia sady tompon’ny licence TEDx eto Madagasikara no mpikambana mpiara-manorina ihany koa ny Malagasy i-Hub.
Ny Fiovan’ny Toetrandro no ifantohana amin’ity andiany ity. Tonga maro ireo avy amin’ny sehatra maro samihafa: Antenimieram-pirenena, Conservation Internationale, WWF, Club Vintsy, Mpianatra momba ny fambolena avy any amin’ny ambaratonga ambony, mpikirakira teknolojia, ireo liam-baovao, ny mpandraharaha isan-karazany sy ny maro hafa tsy voatanisa. Saingy ny tena nahavariana sy nahalasa ny saina dia ity. TSY NISY SOLOTENA NY FITONDRAM-PANJAKANA, eny fa na dia hoe farafaharatsiny ny ministera voakasika aza, mba hanatrika ity sehatrasa ity.
Misokatra hatramin’ny faran’ity volana ity ny fandraisana ireo tetikasa vonona hifaninana.
Ny tsy nahitàna solotenan’ny fitondrana teny amin’ity hetsika nokarakarain’ny Malagasy i-hub ity dia toa milaza fa tsy ny sehatry ny fampianarana izay efa nasiana resaka teto ihany no tsy iasàn’ny mpitondra saina, fa tafiditra koa ny fiarovana ny resaka tontolo, sy ny fiovaovan’ny toetrandro.
Fa hiverina amin’ny Apps4Africa isika. Raha fanentanana sy fifanakalozan-dresaka tamin’ny fomba malalaka sy fifandresen-dahatra no nisy ny maraina, dia nizara ho andiany roa kosa ny mpanatrika tamin’ny tolakandro. Tao anatin’ireo andiany ireo dia samy nametrahana manampahaizana amin’ny fanoratana rindrambaiko, ary ny ambiny dia manampahaizana amin’ny sehatra misy azy avy. Ny tanjona tamin’ny fametrahana ireto andiany ireto dia ny hanaovana fifanakalozan-dresaka sy hamoahana foto-kevitra iray azo havadika ho vokatra fanjifa amin’ny alalan’ny finday, ka ho azon’ny rehetra ampiasaina mba hiadiana amin’ny fiovan’ny toetrandro. Ary dia nisy tokoa moa ny vinavina 2 tafavoaka nandritra izany. Nafàna tokoa ny fifanakalozana, ka tao ny naneho ahiahy ny amin’ny tsy mbola maha-ara-potoana ny zavatra toy itony ho an’ny Malagasy, izay ny tsy mbola maika afa-tsy izay ho ao am-biliany, noho ny fhasahiranana’ny isan-tokantrano.
Ny dingana arahana rehefa manana tetikasa azo iatrehana ny fiovan’ny toetandro ianao, nefa tsy manana fahaizana hamadika izany ho rindrambaiko azo ampiasaina ho an’ny rehetra anby anaty finday, dia ny mitady olona hanampy anao amin’ny fanatanterahana izany. Izay no tanjona tamin’ity androany ity.
Mbola hitohy ny hetsika rahampitso, saingy tsy eny Tsimbazaza (CIDST) intsony, fa ho eny amin’ny Ivontorean’ny Gazety Malagasy (Centre de Presse Malagasy) – WWF Antsakaviro indray. Manomboka amin’ny 10 ora.
Indro omena eto ambany ny rohy ahafahanao mamantatra bebe kokoa momba ity Apps4Africa ity. Alohan’ny hisoratanao anarana hifaninana dia tsara ny mahafantatra fa tsy mety ovàna intsony izay efa naelfa, koa vakio tsara alohan’ny hanoratanao ny tenanao, na ny tarikao hirotsaha hifaninana ao. Ny loka ho an’ny voalohany dia 15.000 dolara Amerikana, Ary ny irariana dia mba ho Malagasy izay voalohany izay.
Filed under: #TED, #TEDxTana, #TEDxTNR, aterineto, Fanolorana, haitao, telecommunication, toetr'andro, tontolo iainana | Tagged: #Apps4Africa, #TED, Antsakaviro, CIDST, Malagasy i-hub, WWF |	Leave a comment »